रेखाले खोलिन् : स्कुलको ब्यायफ्रेण्ड देखि छवि ओझा सम्मको कहानी | News Filmy
यस्ता छन् छवि ओझा प्रति आक्रोशित शब्दहरु
नयाँ पत्रिका दैनिकले रेखा थापाको सानो उमेर देखि अहिले सम्मको कहानीलाई फिचर गरेको छ ।
रेखा थापाको आफ्नै शैलीमा लेखिएको यो फिचर रिपोर्टमा रेखाले स्कुल पढ्दाको ब्यायफ्रेण्ड रहष्य देखि डिभोर्स पति छवि राज ओझा सम्मको कथा खोलेकी छिन् । उनले यो फिचर स्टोरीमा छविराज ओझाको बिषयमा आक्रोसित शब्दहरु समेत प्रहार गरेकी छिन् । पढ्नुस्
मिस कोसी’ मेरो जीवनको टर्निङ प्वाइन्ट बन्यो । ९ कक्षा पढ्दा नै ‘मिस कोसी’ भएँ । स्कुलमै पत्रकारहरू अन्तर्वार्ता लिन आउँथे । ‘ए म त ठूली पो भएछु’ भन्ने लाग्थ्यो । बिस्तारै पढाइमा रुचि लाग्न छाड्यो । डिग्रीको सर्टिफिकेट लिएर केही हुने थिएन, मलाई त रेखा थापा बन्नु रहेछ । मेरो सर्टिफिकेट/आवरण यही रहेछ ।
सानैदेखि विद्रोही स्वभावकी थिएँ । लैंगिक विभेद, दाइजो प्रथाको विरोध गर्थें । स्कुलमै पनि शिक्षकलाई ‘ह्वाट इज दिस’ भन्ने हैसियत राख्थेँ । टाइसुटमा पढ्न जान्थेँ । सेतो सर्ट र निलो फ्रक लगाउने सरकारी स्कुलका विद्यार्थी मसँग साथी बन्दैनथे । त्यो विभेद पनि मैले महसुस गरेकी छु । बाल्यकालमा खेल्ने, रमाउनेभन्दा पनि खोजमूलक टाइपकी थिएँ म । अलि अस्वाभाविक थिएँ भन्दा पनि हुन्छ । बुबा कानुन व्यवसायी, आमा स्वास्थ्य कार्यकर्ता, बालापन मोरङको सलकपुरमै बित्यो ।
अहिले पनि मेरा उमेरका हिरोइन पार्टी गरिरहेका हुन्छन्, खुलेआम हिँडिरहेका हुन्छन्, खाइरहेका हुन्छन् । तर, म मेरो चार दिवारीभन्दा बाहिर कतै जान्नँ । गएर नराम्रो हुने होइन । तर, हाम्रो पेसै यस्तो छ कि सकभर पर्दाभित्र रहनुपर्छ । यस्तै कुराले म ती चिजबाट धेरै टाढा भएँ । बच्चा वा टिनएजकी रेखा थापाको अनुभूति धेरै कम छ ।
म एकदमै मिलनसार मान्छे हुँ । मान्छेले बाहिरी आवरण हेर्दा रेखा थापा झगडालु भन्छन् । तर, म एकदम सरल स्वभावकी र इमानदार छु । एकदमै मिलनसार पनि छु । इमानदार मान्छेलाई कुनै पनि नचाहिँदो कुरा मन पर्दैन । मन नपरेपछि विद्रोह गर्छ । त्यसपछि ऊ छुच्चो देखिन्छ ।
ब्वाइफ्रेन्डले अर्कैसँग बिहे गर्‍यो
ऊ अर्कै स्कुलमा पढ्थ्यो । बाइकमा स्कुल जान्थ्यो, त्यो जमानाको ‘हिरो’ नै थियो । स्कुल जाँदा–फर्कंदा ऊ सधैँ चोकमा भेटिन्थ्यो । मसित बोल्दैनथ्यो तर, एकोहोरो हेरिराख्थ्यो । उसलाई देख्दा मेरो पनि ढुकढुकी बढ्थ्यो र लजाउँदै हिँड्थेँ । घरबाट निस्कँदा आफू नराम्री लाग्थ्यो । तर, उसले हेरिरहँदा भने आफैंलाई राम्री देख्थेँ । मलाई पनि ऊ मनपथ्र्यो । त्यसबखत ऊ ९ र म ६ कक्षामा पढ्थ्यौँ । हाम्रो स्कुलको ल्यांग्वेज टिचर पनि थियो ऊ । प्रत्येक भ्यालेन्टाइनमा ग्रिटिङ पठाउँथ्यो, नोटबुक लिने बहानामा घरसम्मै आइपुग्थ्यो । सँगै पानीपुरी र चटपटे खान्थ्यौँ । निश्चल प्रेम थियो हामीबीच ।
ऊसँगको सम्बन्धले म राम्री छु भन्ने आभास गरायो । ब्युटी कन्टेस्टमा मलाई खासै रुचि थिएन, उसकै नजरबाट म कोसी अडिसनमा गएँ । र, मिस कोसीको टाइटल जितेँ पनि । उसले इन्करेज नगर्दो हो त मैले आफूलाई मूल्यांकन गर्दिनथेँ सायद । एसएलसीपछि म काठमाडौं आएँ, ऊ उतै बस्यो । म करिअर बनाउनतिर लागेँ, उसले अर्कैसित बिहे गर्‍यो ।
उसको बिहेमा गएँ । त्यतिवेला लाग्यो, यसले किन बिहे गरेको होला ? पर्खिन सक्थ्यो नि † उसलाई मप्रति विश्वास भएन होला सायद । म पनि स्टुपिड थिएँ, मनको कुरा भन्न सकिनँ । आफ्ना भावना सेयर गरिनँ, सायद गल्ती यहीँ भयो । माया प्राप्ति मात्रै होइन, त्याग पनि हो भनेर मनलाई सम्झाएँ ।
बचपनको माया के होला र जस्तो लाग्थ्यो, अहिले महसुस गर्छु, त्यो नै माया थियो । यो मनको कुनै कुनामा अहिले पनि त्यो मान्छे छ । कताकता मिस गरिरहन्छु । कुनै सक्सेस, वेदनामा वा पीडामा उसको धेरै याद आउँछ ।
आजभोलि पनि कहिलेकाहीँ डराई–डराई फोन गर्छ । उसलाई थाहा छ, म मुडी छु भन्ने । त्यसैले धेरै फोन गर्दैन । बरु, ममीसँग फोनमा मेरो खबर लिन्छ । फोन हुँदा हामी बालापनका धेरै कुरा गर्छौं । ‘तिमीले मलाई सिरियसली लिएकी थिएनौ जस्तो लाग्थ्यो, त्यसैले बिहे गरेँ’ भन्दै भावुक बन्छ । म पनि ‘तैँले मलाई कुर्न सकिनस् है, के माया थियो तेरो’ भनेर जिस्काउँछु । अहिले त बोल्दा पनि फिल्मी डायलग हुन्छ ।
चाँदीको एक रुपैयाँ पारिश्रमिक
पैसाप्रति म लालायित कहिल्यै भइनँ । पैसाको पछि दौडेकी भए आज रेखा थापा पनि बन्दिनथेँ । एक–दुई फिल्मपछि निर्माताहरूले फिल्म खेलाउन खोज्थे । त्यो समय मैले जति डिमान्ड गरे पनि हुन्थ्यो । निर्माताको अवस्था मैले बुझेकी थिएँ । उहाँहरूले दु:ख गरेरै फिल्म बनाइराख्नुभएको छ, उहाँहरूकै कारण आज फिल्म उद्योग टिकिरहेको छ । त्यसैले निर्मातासँग कहिल्यै पैसाको डिमान्ड गरिनँ ।
पहिलो चलचित्र ‘हिरो’मा मैले चाँदीको एक रुपैयाँ पारिश्रमिक पाएकी थिएँ । मलाई प्लेटफर्म चाहिएको थियो, त्यसैले ‘हिरो’बाट पारिश्रमिकको अपेक्षा पनि राखिनँ । उनीहरूले पनि दिन चाहेनन्, सायद त्यो श्रमशोषण थियो । दोस्रो फिल्म ‘कस्तो साइनो’मा त्यस्तै १०/१५ हजार मात्र दिए । ‘मितिनी’ खेल्दा बल्ल मैले २५ हजार पाएँ । त्यो मेरा लागि भयंकर ठूलो भयो । ‘मितिनी’पछि नै मैले लाख पाउन थालेँ । तर, डिमान्ड गरिनँ । उहाँहरूले नै कामको मूल्यांकन गरेर दिनुहुन्थ्यो । पाँच लाखसम्म पाएँ । त्यत्रो पैसा लिँदा मेरो मनमा सधैँ बेचैन हुन्थ्यो, मैले यत्रो पैसा किन लिएँ ? भोलि निर्माताको रिटर्न आएन भने ? फिल्म नचलुन्जेल नमीठो लागिरहन्थ्यो ।
पैसालाई प्राथमिकता दिन्थेँ भने मसँग अहिले अथाह सम्पत्ति हुन्थ्यो होला । मसँग नामबाहेक केही पनि छैन । मात्र इन्डस्ट्रीले दिएको घर र गाडी छ ।
राजेश हमाल ‘मेकानिक’ हुन्
‘हिरो’ फिल्मकी हिरोइन छानिएपछि मलाई रातभर निद्रा लाग्दैनथ्यो । ‘के गर्ने होला, कसरी गर्ने होला’ मनमा यस्तै तर्कना मात्र आउँथे । मैले कल्पनै गरेकी थिइनँ, कुनै दिन राजेश हमालकी ‘हिरोइन’ बन्छु भन्ने । सोच्थेँ– म ठूली हुँदा उहाँ बूढो भइसक्नुहुन्छ होला । तर, म उहाँकै हिरोइन बनेर फिल्म खेल्दै थिएँ । त्यसैले पनि एक्साइटमेन्ट बढी थियो ।
‘तिम्रो मन त चक्कु छुरी, यो मन सारंगी’ गीतमा पहिलो सट दिएँ । सट क्यामेरामा हेरेपछि निर्देशक नरेश पौडेलले भन्नुभएछ, ‘छ्या, हामीले गलत च्वाइस गरेछौँ ।’ म बाहिर राम्री देखिन्थेँ रे, सेटमा नराम्री देखिएछु । त्यतिवेला नरेश सरले भन्नुभाथ्यो, ‘यो तेरो पहिलो र अन्तिम चलचित्र हो ।’ म ‘भविष्यमा देख्नुहुनेछ’ भनेर त्यतिवेला सेटमै रोएकी थिएँ । जब मैले डान्स मुभमेन्ट गर्न थालेँ, त्यसपछि उहाँहरू खुसी हुनुभएछ । अहिले नरेश सरलाई भेटेका वेला त्यो कुरा झिक्छु । उहाँ ‘तलाईं सुध्री भन्नका लागि मैले इन्करेज गरेको थिएँ’ भन्नुहुन्छ ।
सेटमा राजेश हमालले इन्करेज गर्लान्, सिकाउलान् भन्ने सोचेकी थिएँ । अहँ, राजेश हमालबाट त्यो संस्कार मैले पाइनँ । राजेश हमालले न रेस्पोन्स गर्थे, न त गाइड नै । उहाँ त कसैसित बोल्नु पनि हुन्न रहेछ । मेकानिक जस्तो लाग्यो मलाई । उहाँप्रतिको मेरो सम्मान यदाकदा गुम्यो त्यसपछि । म नयाँ थिएँ । नयाँ कलाकारले आफूभन्दा सिनियर कलाकारसँग केही सिक्न खोज्छ । उहाँसँग १५/२० वटै फिल्म खेलेँ, अहँ उहाँको व्यवहार कहिल्यै फरक पाइनँ ।
‘सेक्योर’ हुन छविसँग बिहे
‘हिरो’ खेलेपछि फिल्म लाइनमा चल्ने हल्ला नराम्रा लागे । पत्रपत्रिकामा हिरोइनहरूका नराम्रा समाचार धेरै आउँथे । त्यतिवेलै कामना पत्रिकामा निरुता दिदीको धेरैजनासँगको अफेयर र गर्भवती भएको समाचार निस्कियो । त्यो समाचारले मलाई पनि त्रसित बनायो । ‘ओहो, भोलि त बिहे गर्न गाह्रो पर्ने रहेछ, हिरोइनहरूलाई त नराम्रा भन्ने रहेछन्,’ एक किसिमको ‘अनसेक्योर’ फिल गरेँ ।
मैले सत्य बोल्नुपर्छ, त्यतिवेला मलाई सेक्युरिटी चाहिएको थियो । म स्वाभिमानमा बस्न रुचाउँछु, भोलि कसैले नराम्रो भने मैले फिल्म लाइन नै छाड्नुपथ्र्यो होला । ‘बरु बिहे नै गरौँ, एटलिस्ट सेक्योर त भइन्छ’ भन्ने लाग्यो । अनि, मैले छवि ओझासँग बिहे गरेँ । मेरो त्यो निर्णयमा बुबाबाहेक अरू कोही पनि सहमत हुनुहुन्नथ्यो । दुई/दुईवटी स्वास्नीमा फेलियर मान्छे, माया नै गर्ला भन्ने लोभ भयो । ‘सेक्योर’ पनि हुनु थियो । आफ्नै खुसीले छविसँग बिहे गरेँ । तर, त्यो असफल भयो । मैले भन्नुपर्दा सायद त्यो विवाह नै थिएन ।
मैले वैवाहिक जीवनको अनुभूति गर्न नै पाइनँ । श्रीमान्बाट पाउने माया कस्तो हुन्छ, त्यो पाउने चाहना पनि थिएन मलाई । श्रीमान्सँगको जिन्दगी कस्तो हुन्छ, त्यो नियाल्ने फुर्सद पनि थिएन मसँग । सधैँ बाउसँग बसेजस्तो फिल हुन्थ्यो । र, उसले पनि स्वास्नीको व्यवहार कहिल्यै गरेन, जहिले पनि आफ्नो जेठो छोरा भन्थ्यो मलाई । म पनि जवान केटी, सम्भवत: सधैँ छोरा बन्न सकिनँ हुँला । टिनएजर्स थिएँ, त्यो टाइममा बिहे गर्दा मेरो बुद्धि पुगेन होला ।
मन मिलेन, छुट्टिएँ
छविसँगै बसेर म जवान भएँ । मलाई पनि थाहा छैन, हामीबीच कहाँबाट नराम्रो भयो । राम्रो कहिले र नराम्रो कहिले भयो थाहै भएन । यो सबै समयको खेल हो । मलाई जुन समय जे राइट लाग्यो, त्यही गरेँ । र, यसमा खुसी पनि छु । मैले बिहे गरेँ, खुसी भएँ या पछुताएँ त्यो मेरो नितान्त निजी कुरा हो । १० वर्ष ऊसँग बस्दा मैले जे भोगेँ, जे फेस गरेँ, त्यो समयलाई सम्मान गर्छु । म खुसी भइनँ होला, मलाई खुसी केमा थियो, उहाँले बुझ्नुभएन होला । उहाँले खुसीमा राख्दाराख्दै त्यो खुसी मलाई पचेन पनि होला । यति मात्र भन्न सक्छु– मन मिलेन, छुट्टिएँ ।
कानुनी हिसाबले नेपालमा डिभोर्स गर्दा श्रीमान्को आधा सम्पत्ति पाइन्छ । तर, म यस्ती महिला पात्र हुँ, एक पैसा नलिई उल्टै गाडी गिफ्ट दिएर हिँडेकी केटी हुँ । म सम्पत्ति या कुनै पनि कुरामा लालायित हुने केटी होइन । मैले चर्को घाममा ढुंगामाथि खुट्टामा खिया आउने गरी नाचेर जगेडा गरेको पैसा र ऋणमा किनेको गाडी थियो त्यो । गाडी मेरै थियो, फिर्ता गरेकी होइन ।
जीवन एकपटक पाइन्छ, कोहीसँग सम्झौता गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । कसैको शासकीय प्रवृत्तिमा, कसैको दमनमा बस्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन । कोही कसैको दासी होइन । आफ्नो अडान र इमानदारितामा रम्ने स्वाभिमानी केटी हुँ म । उहाँले रेखाले मेरो घर र गाडी फिर्ता दिई, मैले रेखा फिल्म्स् उसलाई दिएँ भन्नुहुन्छ रे π रेखा नाम कसको हो ? अनि रेखा फिल्म्स् कसरी मेरो नाममा फिर्ता हुन्छ ? कस्तो अजीब कुरा, म त जिल्ल पर्छु । छवि प्रोडक्सन मलाई दिएको हो र ? त्यो त मेरो नाम युज गरेर बनाएको ब्यानर थियो । अनि मेरै ब्यानर मलाई कसरी फिर्ता हुन्छ ? मेरो लाइफमा म मात्रै छु, मेरो बारेमा बोल्ने अधिकार मलाई मात्रै छ । मलाई जुन समय जे राइट लाग्यो, त्यही गरेँ । र, यसमा खुसी पनि छु । अब म ‘पास्ट’का कुरा गर्न चाहन्नँ ।
छवि बीचको पुरुष पर्नुभयो
‘आई एम ब्याचलर’ । आजभोलि चाहिँ कताकता बिहे गरौँ जस्तो लाग्छ । श्रीमान्को महत्त्व कस्तो हुन्छ होला ? बिहे गरेपछि के–के हुन्छ होला ? त्यो चिज बुझ्न मन लागेको छ । बिहे गर्ने उमेर भर्खर त भा’छ । आमा बन्ने रहर अझै छैन मलाई । पहिले त बिहे नै गर्ने रहर छ, अवश्य त्यतिवेला पनि बच्चा चाहिनँ होला ।
स्कुलदेखि नै लैंगिक विभेदको विरोध गर्थेँ । कमाउने छोरी हुँ, छोराबराबर छु । अनि, मेरी ममी दुई दिन आएर बस्दा, दुई छाक खाँदा ‘रेखाकी आमा कति आउँछे’ भन्ने त्यो लोग्नेमान्छेको सोच कति निकृष्ट हो । सरस्वतीकी रूप हुन् मेरी आमा । सबैलाई राम्रो संस्कार दिएर हुर्काउनुभयो । ममी ६० लाग्नुभयो, छवि र ममीमा १० वर्षको ग्याप होला । मलाई लाग्छ, मेरी ममीलाई जजमेन्ट गर्ने हैसियत ऊसँग छँदै छैन । हामी छुट्टिनुमा मेरी ममीलाई दोषी देख्यो । मर्दांगी भएको पुरुषले यस्ता कुरा नगर्नुपर्ने हो, सम्भवत: उहाँ बीचको पुरुष पर्नुभयो । कमजोर मान्छेले अर्कालाई आरोप लगाउने हो । म आरोप लाउन चाहन्नँ ।
संसारमा सबैकी आमा ममतामयी नै हुन्छन् । कुनै पनि यस्ती आमा छैनन्, जसले आफ्नै सन्तानको घर बिग्रियोस् भन्ने सोच्छ । सम्भवत: सौतेनी आमाले पनि त्यस्तो सोच्दिनन् होला । छविलाई मेरो प्रतिप्रश्न छ : पहिली स्वास्नी उहाँले छोड्नुभो । दोस्री स्वास्नी झुन्डिएर मरिन्, उसकी आमाले गर्दा हो ? यदि मेरी ममीजस्तै उसकी आमा भइदिएको भए सायद कुनै स्वास्नी आत्महत्या गर्नुपर्ने, कसैले छोड्नुपर्ने स्थिति आउँँदैनथ्यो होला । राम्रो संस्कार त पाउँथ्यो होला नि † उसको भाग्य नै त्यस्तै छ । ममीलाई सुनाएँ, ‘उसले त तपाईंलाई आरोप लगायो रे नि ’ ममी हाँस्नुभो । ‘बिचरा, कहिले सुध्रने होला है उसको विचार,’ ममीले यति मात्रै बोल्नुभयो ।
मैले छविलाई बनाएकी हुँ
छवि ओझाले आइटम डान्समा पनि पत्याएको थिएन मलाई । नरेश पौडेलले आफ्नी प्रेमिकालाई लिड रोलमा लिएर फिल्म बनाइदिए । तर, रेखा थापाकै ब्यानरमा बनेको ‘अजम्बरी नाता’मा निरुता सिंह लिड रोलमा थिइन् । मलाई एउटा आइटम डान्स मात्र दिइएको थियो । छविको फिल्ममा रेखा थापा कि निरुता सिंहको पछाडि कि करिश्मा मानन्धरको पछाडि एउटा सिनमा मात्रै हुन्थी । छवि ओझाले बनाएका तीनवटा फिल्म हेर्नुस्, कहाँ छु म लिड रोलमा ? अनि कसरी बनायो छवि ओझाले रेखा थापालाई ?
बरु, सोभित बस्नेतले मलाई ‘एक्सन लेडी’ बनाइदिए । मलाई फिल्म इन्डस्ट्रीमा ‘हिरो’ बनाउने सोभित बस्नेत हुन् । उनले ‘दुर्गा’मा मलाई लिड रोलमा लिए । फिल्मले सय दिन मनायो । ‘दुर्गा’मा मेरो क्रेज देखेपछि बल्ल ‘हिम्मत’ बनेको हो । म बिक्न थालेपछि छविले लिड रोलमा लिन थालेका हुन् । छविको एउटा फिल्म खेल्न अरू पाँचवटा फिल्म छाड्नुपथ्र्यो । आर्थिक रूपमा पनि नोक्सानी थियो मलाई ।
हिजो नमस्ते नेपालको टिनको छानामा बस्ने व्यक्तिको आफ्नै घर त बन्यो नि † ब्यानर बन्यो, स्थापित प्रोड्युसर भए । हिजो नरेश पौडेल र श्याम खेतानको पछाडि थर्डमा हुन्थे, मैले फस्र्ट बनाएँ नि त । रेखा फिल्म्स् बनेपछि उहाँ सोले प्रोड्युसर बन्नुभएको हो । फिल्ममा ‘अलरेडी’ मेरो नाम युज गरिन्थ्यो–रेखा थापाको हिम्मत, रेखा थापाको किस्मत । उहाँलाई त कसले चिन्थे र ? र, अर्को कुरा, रेखा थापालाई छवि ओझाले पालेको पनि होइन, म ‘इन्डिपेन्डेन्ट’ केटी हुँ ।
सभासद्को टिकट पनि काम लागेन
माधव नेपालको सरकारविरुद्ध एकीकृत माओवादी सडक आन्दोलनमा थियो । आन्दोलनमा धेरै मान्छे जान डराए । तर, म गएँ । मलाई कसैले लगेको होइन, आफैं गएकी थिएँ । मेरो करिअर नै सखाप हुन सक्थ्यो । करिअर दाउमा राखेर म त्यहाँ जान हुने अनि प्रचण्डबा स्टेजमा आएर मसँग नाच्न नहुने ? कला क्षेत्रको सम्मान थियो त्यो । तर, ‘प्रचण्ड रेखासित नाचे’ भनेर धेरैले धेरैथरीको विश्लेषण गरे ।
एमाओवादीमा लागेपछि राजनीति गर्छु, देश हाँक्छु भन्ने सपना देख्न थालिसकेकी थिएँ । पार्टीले पर्सा क्षेत्र नं. १ बाट मलाई टिकट पनि दियो । पेरिसडाँडामा टोपबहादुर रायमाझी दाइ र मैले टिकट लिएर उद्घाटन गरेका थियौँ । टोपबहादुर दाइ त्यही दिन फ्लाइटमा आफ्नो क्षेत्र जाँदै हुनुहुन्थ्यो, म उर्मिला दिदीहरूसँग साँझ बसमा जाँदै थिएँ । त्यसैवेला भोटर लिस्टसहित निर्वाचन आयोगको कार्यालय जान भनियो । टोपबहादुर दाइ त पसिनै पसिना हुनुभयो, म थचक्कै बसेँ । हातमा टिकट छ, भोटर लिस्टमा नाम छैन ।
प्रचण्डबा, बाबुराम भट्टराई, पोष्टबहादुर बोगटीलगायत नेता सबै एकै ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो । ‘तपाईं मान्छेचाहिँ हरे, के भाको,’ प्रचण्डबाले गाली गर्नुभयो । अरू नेताले पनि गाली गर्नुभयो ।
‘हजुरहरूले भन्नुपथ्र्याे नि, मलाई सोध्नुपथ्र्यो, मेरो मात्र होइन, तपाईंहरूको पनि दोष छ,’ मैले उहाँहरूलाई भनेँ । त्यसपछि मनोनित गरिदिउँला भन्नेसम्मका कुरा पनि भए ।
मैले मिस नेपालमै पाठ सिकेकी थिएँ, मान्छेले उमेरभन्दा ज्यादा गर्नु नहुने रहेछ । त्यसपछि गणेशमान सिंहले भनेजस्तै म ‘भेडा नै हुँ’ भन्ने पनि लाग्यो । म अझै पनि राजनीति गर्न लायक भइसकेकी रहेनछु । सोच्थेँ–देश युवाले हाँक्ने हो, कहाँ पिण्ड खाने बूढाहरूले हाँक्ने हो र तर, म गलत रहेछु ।
त्यो रात रोएरै बित्यो । उज्यालो नभइदिए हुन्थ्यो झै लाग्यो । लाज लाग्यो, कसरी फेस गर्ने होला ? कति ठूलो मिस्टेक π त्यो गल्ती मैले लुकाउन पनि सक्थेँ । तर, लुकाउन चाहिनँ । मैले बुभेँm, एक्लो लडाकु रहेछु म । मेरा वरिपरि कोही रहेनछन् । म युद्धमा सधैँ एक्लै थिएँ, एक्लै नै रहेछु । म एक्लो योद्धा थिइनँ भने सायद कसैले घच्घच्याउँथ्यो । मलाई त साथीहरूले पनि भनेनन् । साथी बन्न पनि सबैजना रेखा थापाको नामको पछाडि आउँदा रहेछन् । त्यो रेखा थापाको नर्मल युवतीलाई पनि अरू युवतीसरह माया चाहिन्छ, सामिप्यता चाहिन्छ । त्यो साथ त कसैले दिँदा रहेनछन् । यसबाट ठूलो पाठ सिकेँ ।
आर्यन, विराजहरू मेरा बच्चा हुन्
रेखा फिल्मस्बाट बनेको फिल्म किस्मतको पोष्टरमा रेखा, विराज र आर्यन । यहि फिल्मबाट आर्यन सिग्देल फिल्म नगरीमा प्रवेश गरेका हुन ।
रेखा फिल्म्स्ले सधैँ नयाँ कलाकारलाई स्थान दियो । एकपटक लिएको कलाकार फेरि अर्कोपटक प्राय: लिन्नँ । किनकि, अर्कोले पनि चान्स पाउनुपर्‍यो । विराज भट्ट, आर्यन सिग्देल मैले नै ल्याएका मान्छे हुन् । सिरियल खेल्ने केटाहरूलाई हिरो बनाएँ । आर्यन सिरियल खेलिराथ्यो, लोकदोहोरी खेल्थ्यो क्यारे † मैले ‘किस्मत’मा ब्रेक दिएँ । विराजलाई ‘हिम्मत’ खेलाएँ । मैले जन्माएका सन्तान मभन्दा ठूला कहिल्यै हुन्छन् ? उल्टै मसँग नाम जोड्दा चित्त दुख्छ कि दुख्दैन ?
दुइटै हातविनाको मान्छेलाई हिरो बनाउने हैसियत भएकी केटी हुँ म । हिरो चाहिँदैन, हिरो बनाउँछु म । अहिले चलेका हिरोहरू हिजो मसँगै खेलेर हिट भएका हुन् । हो, घमन्डीचाहिँ यहीँनेर भएँ, यस कुरामा म घमन्डी नै हुँ । मान्छेले हैसियत बिर्सनुभएन । सहयोग एकपटक गर्छ मान्छेले, पटक–पटक गर्दैन । स्मरण रहोस्, आर्यन, विराजहरू रेखा फिल्म्स्ले जन्माएको हो । यी त मेरा बच्चा हुन् । तिनीहरूसँग मेरो नाम पटक–पटक जोडेर गसिप किन बनाइन्छ ? यिनीहरूलाई मैले कहिल्यै त्यो लेभलमा राखिनँ । मलाई त यिनीहरूका विषयमा कुरा गर्दा पनि लाज लाग्छ । यिनीहरूसँग मलाई जोडिन्छ, तर म बाटोमा भेट्दा बोल्दा पनि बोल्दिनँ हुँला ।
दुई वर्षभित्र बिहे गर्छु
बिहे र मृत्युबारे भाग्यमा विश्वास गर्छु, सफलताबारे कर्ममा । रेखा थापालाई अफर गर्नै डराउँछन् । हिरोइन मेरो पेसामा हो, तर म एकदमै साधारण केटी हुँ । समाज, देश र नारी जातिलाई सम्मान गर्ने पुरुष जो सानोतिनो घिसिपिटी कुरामा चियोचर्चो गर्ने खालको हुनुभएन । मर्दांगी भएको र पुरुषको परिभाषाभित्र पर्ने मान्छे मलाई मनपर्छ । जो इमानदार, स्वाभिमानी र हक्की स्वभावको होस ।
बिहे गर्ने इच्छा छ, अबको दुई वर्षभित्र गर्छु । मेरा लागि पनि कहीँ न कहीँ कोही न कोही त लेखेकै होला । भेटिएन भने पनि मसँग अथाह उमेर बाँकी नै छ । ५० वर्षको उमेरमै भए पनि गरौँला । के थाहा, न इन्डियाको रेखाजस्तै पो हुन्छु कि ?
साभार : नयाँ पत्रिका दैनिक (शनिवारको अंकबाट)
प्रस्तुति : खगेन्द्र पन्त/प्रवीण बुढाथोकी